Sun, May 27, 2018 | 15:28:21 NST
लाङटाङ निकुञ्जमा एक करोड २७ लाख राजस्व संकलन
बलराम घिमिरे/उज्यालो । रसुवा, साउन ५ – लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले आर्थिक बर्ष ०६८/०६९ मा एक करोड २७ लाख नब्बे हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । निकुञ्जले घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरुबाट सबैभन्दा धेरै राजस्व उठाएको छ । विदेशी पर्यटकहरुबाट मात्र एक करोड दुई लाख ९१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको सहायक संरक्षण अधिकृत वुद्धिराज पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
लगातारको पानीले तरकारी आपुर्तिमा कमी
काठमाडौ, साउन ५ – बिहीबारदेखि लगातार पानी परेका कारण काठमाडौको थोक बजारमा तरकारी कम भित्रिएको छ । बिहीबारभन्दा शुक्रवार ३० प्रतिशतले तरकारी कम भित्रिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । झरी परेपछि तरकारी बारीमा किसान नजाने र वर्षामा सडक बिग्रने गरेकाले बाहिरी जिल्लाबाट पनि तरकारी कम आएको बिक्रेताहरुले बताएका छन् ।
भक्तपुर भ्रमण गर्ने २ लाख भन्दा बढी विदेशी
रमेश गिरी/उज्यालो । भक्तपुर, साउन ५ – आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ मा भक्तपुर नगरपालिकाको भ्रमण अहिलेसम्मकै बढी २ लाख २३ हजार ३८ जना विदेशी पर्यटकले गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा भने भक्तपुरमा १ लाख ९५ हजार ८४७ जनाले भ्रमण गरेका थिए ।
वर्षाले तरकारीको कारोवार घट्यो
काठमाडौ, साउन ४ – लगातार पानी परेका कारण बिहीबार काठमाडौको तरकारी थोक बजारमा कारोबार निकै कम छ । बुधवारराती देखिनै निरन्तर झरी परिरहेकाले कारोबार प्रभावित भएको ब्यवसायीले बताएका छन् । झरीका कारण बिग्रन सक्ने तरकारीको भाउ घटाएर बेच्दा पनि कारोबार नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
एकजना नेपालीको टाउकोमा १९ हजार ऋण
कमल पराजुली/ उज्यालो । काठमाडौं, साउन ३ – एकजना नेपालीको भागमा ऋणको भार झण्डै १९ हजार पुगेको छ । सरकारले वैदेशिक र आन्तरिक गरि लिएको ऋणको प्रतिव्यक्ति भाग लगाउँदा एकजनालाई १८ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ ८० पैसा ऋणको भार परेको छ ।
सुनको कारोबार आधा घट्यो
काठमाडौ, साउन ३ – सिजन नभएकाले सुनको कारोबार आधा भन्दा बढीले घटेको छ । भाउ बढेकाले बिहेको सिजन चल्दा पनि कारोबार कम भएकोमा असारको अन्त्यदेखि भने आधा भन्दा बढीले सुनको बिक्री घटेको सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताउनुभयो ।
ट्राफिकले उठायो ११ लाख राजस्व
पर्वत, साउन ३ –सवारी नियम पालना नगर्ने सवारी साधनलाई कारबाही गरेर जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले झण्डै ११ लाख रुपैया राजस्व संकलन गरेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पर्वतले आर्थिक बर्ष २०६८/२०६९ मा सवारी नियम उलंघन गर्नेलाई कारबाही गरेर १० लाख ८७ हजार ६ सय ५० रुपैया राजस्व संकलन गरेको हो ।
झरीले तरकारीको कारोबार प्रभावित
काठमाडौ, साउन ३ – काठमाडौको कालीमाटी थोक बजारमा झरीका कारण तरकारीको कारोबार प्रभावित भएको छ । वर्षे तरकारीको उत्पादन बढेकाले अहिले थोक बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरकारी भित्रिएको छ । तर झरीले गर्दा खुद्रा व्यापार पनि फाट्टफुट्ट मात्र भएको व्यापारीहरुले बताएका छन् ।
चितवन, साउन २ – चितवनमा पाउरोटी बितरकहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि बजारमा पाउरोटीको अभाव भएको छ । चितवनका पाउरोटी कारखानाले पाउरोटीको मुल्यमा २० प्रतिशतले बृद्धि गरेपछि पाउरोटी वितरकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
काठमाडौ, साउन २ – सुनको भाउ तोलामा १ सय ५० रुपैँयाले बढेको छ । मंगलवार सुन तोलामा ५५ हजार ७ सय ५० रुपैँयामा कारोबार भईरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढेकाले नेपाली बजार पनि प्रभावित भएको संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले बताउनुभयो ।
बाग्लुङमा १८ करोड बजेट फ्रिज
बाग्लुङ, साउन २ – बागलुङमा आर्थिक बर्ष २०६८/०६९ मा १८ करोड ७ लाख ३० हजार रुपयाँको बजेट फ्रिज भएको छ । आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा जिल्लाका ४३ वटा सरकारी कार्यालयको बजेट २ अर्ब ५७ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँमध्ये २ अर्व ३९ करोड ९९ लाख १ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
एक महिना नबित्दै पिच भत्कियो
आश गुरुङ/उज्यालो । लमजुङ, साउन २ – लमजुङ उदिपुरको आकाशेभीरदेखि भोटेओडारको फूलबारीसम्म गरिएको सडक कालोपत्रे एक महिना नपुग्दै भत्किन थालेको छ । वर्षायाममा कालोपत्रे गरिएको र गुणस्तरहीन सामान प्रयोग भएका कारण सडक भत्किन थालेको हो ।
चितवनमा सरकारी खर्च भन्दा राजस्व संकलन धेरै
मोहन बस्याल/उज्यालो । चितवन, साउन २ – चितवनका सरकारी कार्यालयहरुले एक वर्षसम्म गरेको खर्च भन्दा धेरै राजस्व संकलन गरेका छन् । बिभिन्न सरकारी कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा चार अर्ब २० करोड खर्च गरेका छन् भने पाँच अर्ब ९० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेका छन् ।
साउन लागेपछि तरकारी सस्तियो
काठमाडौ, साउन २ – साउन महिना सुरु भएपछि बजारमा तरकारीको भाउ घट्न थालेको छ । काठमाडौको तरकारी थोक बजारमा मंगलवार धेरैजसो तरकारीको भाउ १० देखि १५ प्रतिशतले घटेको बिक्रेताहरुले बताएका छन् । बजारमा काठमाडौ वरपरबाट नै वर्षे तरकारी बढी भित्रिएको र बाहिरी जिल्लाबाट पनि पर्याप्त मात्रामा तरकारी आएकाले भाउ घटेको व्यापारीहरुको भनाई छ ।
सहमति गरेर चाँडै पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारी
काठमाडौ, साउन १ – पूर्व अर्थमन्त्री एवं नेकपा एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारीले आंशिक बजेटले नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ । राजनीतिक सहमति गरी जति सक्दो छिटो पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
लोकल ल्याण्डलाइनबाट देशैभरि मोवाइलमा फोन जाने
काठमाडौ, साउन १ – लोकल ल्याण्डलाइनबाट देशभर मोवाईलमा फोन गर्न सकिने भएको छ । नेपाल टेलिकमले सोमबारदेखि लागू हुने गरी लोकल सेवा र सीडीएमए फिक्स सेवा लिएका ग्राहकका लागि यो व्यवस्था ल्याएको हो ।
दुग्ध विकास संस्थान ४४ औ वार्षिक उत्सव आज
काठमाडौ, साउन १ – दुग्ध विकास संस्थानले सोमबार आफ्नो ४४ औँ वार्षिकोत्सव मनाउँदैछ । संस्थानले अहिले संकलित कच्चा दूधको संरक्षणका लागि विभिन्न ठाउँमा ६३ वटा दुग्ध चिस्याउने केन्द्र सञ्चालन तथा प्रशोधित दूध तथा दुग्ध पदार्थ उत्पादनका लागि ८ वटा आधुनिक प्रशोधन कारखाना सञ्चालन गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीको बजेटका सपना !
कमल पराजुली/उज्यालो । काठमाडौं, असार ३१ - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पुर्ण बजेट ल्याउन नपाए पनि त्यसका लागि बनाएका नयाँ कार्यक्रमको सूचि भने सार्बजनिक गर्नुभएको छ । पुर्बाधार बिकास, बैक स्थापना गर्ने, १ अर्ब भन्दा धेरै लगानी गर्ने उद्योगीलाई प्रधानमन्त्री उद्यमी सम्मान गर्ने, उत्कृष्ट महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने जैविक मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम तयार गरिएपनि बजेटमा समाबेश गर्न नसकिएको अर्थमन्त्री पुनले बताउनुभयो ।
सवैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा
काठमाडौं, असार ३१ - सरकारले आगामी बर्षको आंशिक बजेटमा सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई १८ अर्ब रुपैया छुट्ट्याएको छ । त्यस्तै बजेटले संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयलाई १२ अर्ब र भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात ब्यबस्था मन्त्रालयलाई ९ अर्ब छुट्टयाईएको छ । त्यस्तै गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयलाई ५ अर्ब रुपैयाँ छ ।
त्रिशुली नदीमा जताततै स्काभेटर
धादिङ, असार ३१ - त्रिशुली नदीमा गैरकानूनी ढंगवाट स्काभेटरको प्रयोग गरि बालुवा निकाल्ने काम बढ्दै गएपछि धादिङको स्थानीय प्रशासनले नदीमा रहेका स्काभेटर सञ्चालनमा रोक लगाउने भएको छ । आईतवार जिल्लाको बैरेनी गाविसबाट गएको सर्वदलीय प्रतिनिधी मण्डलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बेदप्रसाद खरेल, प्रहरी नायव उपरिक्षक गणेश रेग्मी जिल्ला विकास समितिका योजना तथा प्रशासकीय अधिकृत जनकराज शर्मालाई भेटि गैर कानूनी रुपले चलिरहेका स्काभेटर बन्द गर्न दवाव दिएपछि स्थानीय प्रशासनले तत्कालका लागि स्काभेटर सञ्चालनमा रोक लगाएको हो ।
तल्लो मोदीले साउनको दोस्रो हप्ता परिक्षण उत्पादन थाल्ने
दुर्गाप्रसाद शर्मा/उज्यालो । पर्वत, असार ३० - पर्वतको चुवा गाबिसमा निर्मार्णाधिन १० मेगावट क्षमताको तल्लो मोदी एक जलबिद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानिवासिन्दासंग भएको बिबाद सुल्झिएको छ । स्थानियवासिन्दासंग भएको क्षतिपूर्ति विवाद दुबै पक्षबीच आइतबार भएको वार्तामा सहमति भएपछि विवाद सुल्झिएको हो ।
बजेट संविधान र सहमति विपरित :गुरुङ
काठमाडौ, असार ३१ - नेकपा माओवादीका सचिव देवप्रसाद गुरुङले सरकारले आइतवार सार्वजनिक गरेको एक तृतियांश बजेट संविधान र सहमति विपरित भएको दावी गर्नुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आईतवार गरेको साक्षात्कारमा गुरुङले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल खर्च ३ खर्व २९ अर्ब रुपैयाँको एक तृतियांश १ खर्व ९ अर्व रुपैयाँ हुनु पर्नेमा त्यो भन्दा झण्डै ५२ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएर संविधानको धारा ९६ कको ठाडो उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभयो ।
सरकारद्वारा १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोडको तृतियांस बजेट सार्वजनिक
काठमाडौं, असार ३१ - सरकारले आगामी बर्षको लागि १ खर्ब ६१ अर्ब २ करोडको एक तृतियांश बजेट ल्याएको छ । संसद नभएकोले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति डाक्टर रामबरण यादबले सेवा र कार्यहरुका लागि सञ्चित कोषबाट रकम झिक्ने र खर्च गर्ने अधिकारको व्यवस्था गर्ने अध्यादेश २०६९ जारी गरेपछि अर्थमन्त्री बर्षमान पुन अनन्तले राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा बजेट सार्बजनिक गर्नु भएको हो ।
आजै एक तृतीयांश बजेट आउने
काठमाडौं, असार ३१ – आर्थिक वर्ष २०६९÷७० को एक तृतीयाँश बजेट आज सार्वजनिक हुने भएको छ । राष्ट्रपति डा. रामबरण यादवलले आर्थिक अध्यादेश जारी गरेपछि दिउँसो ४ बजे बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ ।
काठमाडौं, असार ३१ – हप्ताको पहिलो दिन आज सुनको भाउ स्थिर छ । अस्ति शुक्रबारको जस्तै सुन आज तोलामा ५५ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भईरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।